सम्मान र शहनशीलतालाई कहिल्यै पनि नभुल्नुहोस् — Motivatenews.Com
सफलता हुनको लागि हामीले गर्नुपर्छ काम तर हामीलाई काम गर्न भन्दा पहिला नै चाहिन्छ दाम । सुख,सन्तृष्टि,दाम, खोजेर पाइने कुरा होइन यो त समय र मौकालाई चिनेको अवस्था स्वत ःआफूलाई प्राप्त गर्न सकिने कुरा हो ।
एक जना मान्छेलाई आँप खान खोज्न थाल्यो । ऊ आपँ खोज्दा खोज्दा थाक्यो । त्यसपछि ऊ रीत्तै हात घर तर्फ फक्र्यो । आफ्ना गाउँका साथीहरुले भने टन्न झोला भरी आपँ लिएर आउदैँ गरेको देख्यो । त्यसपछि ऊ पछुतायो किन भने आफूभन्दा पछाडी गएका साथीहरुले झन झोला भरी टन्न आपँहरु लिएर आए आफूले ल्याउनको त कुरा नै छाडौं बिचराले बगैँचामा चाख्न पनि पाएन । तर उसको आँप खाने तीव्र इच्छा भएकोहुँदा ऊ भोली पल्ट बिहानै उठ्यो । बाहिर पानी परीरहेको थियो । सबै सुतीरहेका थिए । त्यही बेला पारेर गाउँका कुनै साथी तथा घरपरिवारलाई थाहा नदिइकन आपँ लिन गयो । जहाँगहीँ खोज्यो तर एक दाना आपँ पनि पाउन सकेन । ऊ भन्दा पछाडी गएका साथीहरुले घरमा बसेर मज्जाले पाकेका आपँहरु खाईरहेको उसले देख्यो । उसलाई लोभ लाग्यो, डाहा लाग्यो । भोली झन सबेरै उठ्र जाने निर्र्णय गर्यो तर आपँ पाउन सकेन । ऊ सधै जान्थ्यो तर आपँ खान त के एक दाना पनि देख्न पाउदैन्थ्यो । आफू जति छिटो जान्थ्यो आफूभन्दा छिटो गएर अरुले आपँ लिएर आएको उसलाई भान हुन्थ्यो ।
ऊ कैयौँ दिन आँप खोज्न गयो तर पाएन । कारण के रहेछ भने ऊ आँपको बगैंचा नभएर जमुना र आरुको बगैचामा गएर आँप खोज्दो रहेछ । कहाँको जमुना र आरुको बगैंचा ञआरुको बगैंचा कहाँका आँपको बगैचा । आँपहरु छन् कि छैनन् फलेका छन् कि छैनन् भनेर रुख हेरेर भुइतिर भेटाउन सकिन्छ । विचराले रुख हेर्न प्रयासै गरेन खाली अग्ला रुखहरुको फेदमा गएर छाता ओडेर घाँस पन्छ्याउदै खोज्दै गथ्र्यो आँप । केको आपँ कहिलेकाहीँ भने फेला पाथ्र्यो साँप । हामीले पनि जीवनमा उसले आँप खाना खोजे जस्तै सुखै सुख खोज्छौ, आन्द खोज्छौ, जागीर खोज्छौ , सनतुष्टि खोज्छौ तर यी कुराहरु पाउनु पर्ने ठाउँमा खोज्दैनौ ।
हामीले गर्नुपर्छ काम तर हामीलाई काम गर्न भन्दा पहिला नै चाहिन्छ दाम, सख, सन्तुष्टि खोजेर पाइने कुरा होइन यो त समय र मौकालाई चीनेको अवस्थामा स्वतः आफूले प्राप्त गर्न सकिने कुरा हो । कसैको रिस डाहा नगरी अनुसासनमा बसेर काम गर्न खोजेको खण्डमा जस्तो सुकै कुरा पनि एकदिन हात पार्न सकिन्छ । गर्नु पर्न काम सानो कहिल्यै हुँदैन यो त हाम्रो सोचाइले सानो बनाएको मात्र हो । महान् व्यक्तिलाई गएर उनीहरुको सफलताको. रहस्य सोेध्ने हो भने थाहा पाउँछौ हामीले यी सबै कुराहरुको । जो महान् छन्, जो सफल छन् उनीहरुको ठूलो सोचाई र सुरु सानो काम गराइबाट नै सफल भएका छन् । उनीहरुले कहिल्यै उल्टो काम गर्दैनन् जुन कामबाट जे प्राप्त गर्न सकिन्छ उनीहरुले त्यही कामबाट त्यही कुराको मात्रै आशा गरेका हुन्छन् । हामीले जस्तै पढ्ने बेलामा साइन्स पढेर कलेज पास गर्ने त्यसपछि व्यापार गर्ने योजना बनाएर उनीहरुले उल्टो काम गदैनन् । यसरी गरिएको काममा सही परिणनम प्राप्त गर्न गाह्रो पर्दछ । हामी जुन काम गरेका छौ, गदै आइरहेका छौ यो कुरालाई ठम्याउनै पर्दछ, चिन्नै पर्दछ । आफूले गरेको सानो कामले पनि भोली विशाल नतिजा दिन सक्दछ ।
अहिले रु. चार लाखको सटर खोलेर व्यापार गरेको छु यसबाट भोली मैले धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्दछु भन्ने सोंच राखियो भने त्यसले सानो नतिजा पनि दिन सक्दछ । अतः आज हैन अहिले विचार गर्न आवश्यक छ कि मैले अहिले गरेको कामले भोली मलाई अधिकतम के बजाउन सक्दछ ? यस्तो कुराको विचारै नगरी पसल पनि गर्ने, कलेज पनि पढ्ने विदेश जानलाई पासपोर्ट पनि बनाउने, विहानै उठेर पत्रिकामा जागीर खोजेर यसका लागी कुद्ने विदेश पढ्न जाने योजना पनि बनाउने, विवाह गर्नको लागि केटी वा केटा खोज्न पनि नछोड्ने जताततै सोचेको सोच्यै गर्ने , हात पनि जहाँतहीँ हाल्ने गरियो भने ठिकै छ जीवन त चल्दछ तर आफूले खोजेका सुख, सम्पत्ति, सन्तुष्टि प्राप्त नहुन सक्दछन् ।
महान मान्छेले प्रत्येकलाई सम्मान गर्दछ, यदि अरुले उसलाई अपमान गरे भने पनि तिनीहरुलाई सम्मान नै गर्दछ, किनभने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उसले आफ्नो ईज्जतलाई बचाई नै रहेको हुन्छ अर्काले निन्दा वा अपमान जस्तो गरे पनि सम्मान नै गर्न सक्ने गुण उसमा हुन्छ, उ रुख जस्तै शहनशील पनि हुन्छ । के तपाइले फल खानको लागि ढुङ्गा हान्नुभयो भने रुखले तपाईलाई प्रतिकार गर्छ र ? गर्दैन । बरु ढुङगा हान्नेलाई नै मिठो फल दिन्छ , कि दिदैन ? अतः सम्मान र शहनशीलतालाई कहिल्यै पनि नभुल्नुहोस् ।
२०७७ माघ १२ गते प्रकाशित